Momba anay - MAKEFOOD INTERNATIONAL CO., LTD
Trondro efa endasina sy endasina
Manao fandrosoana tsikelikely avy eo amin'ny fivezivezena izahay.
Niorina tamin'ny taona 2009 ny Makefood International. Ny orinasa lehibe ataon'ny orinasa dia ny manafatra sy manondrana ireo hazandranomasina. Nahazo mari-pahaizana MSC, ASC, BRC ary FDA tamin'ny taona 2018 i Makefood International.
Nahatratra 30.000 taonina isan-taona ny habetsaky ny varotra ary nahatratra 35 tapitrisa dolara ny varotra tamin'ny taon-dasa.
Ny orinasa dia nanondrana ny vokatra manerantany, ao anatin'izany ny firenena maherin'ny 50 any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, afrika ary eropa.
Misy sokajy vokatra 30 mahery isan-karazany ao anatin'izany ny Tilapia, Whitefish, Salmona, Squid, sns.
Manana mpiasa matihanina sy mahay 30 ny orinasa hanome fanohanana amin'ny fiteny maro ho an'ny mpanjifa.
Tamin'ny taona 2017, naorina ny biraon'ny Qingdao hanomezana traikefa nahafinaritra amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fizotran'ny asa aman-draharaha.
Tamin'ny taona 2018, naorina ny biraon'ny Zhangzhou hiantohana ny fiarovana ara-tsakafo amin'ny alàlan'ny fifehezana kalitao henjana.
Nahazo mari-pahaizana MSC, ASC, BRC ary FDA tamin'ny taona 2018 i Makefood International.
Tamin'ny taona 2020, natsangana ny departemanta misahana ny varotra anatiny, nanokatra vinavina vaovao hanomezana vokatra avo lenta sy azo antoka hafarana ho an'ny mpanjifa anatiny.
Tamin'ny taona 2020, natsangana ny biraon'ny Dalian hanitatra ny fantsona fizarana sy ny fividianana. Miaraka amin'ny fenitra QC avo kokoa, ny mpanjifa dia afaka mahazo toky amin'ny fividianana ireo vokatra nomenay.
Ny orinasa dia nanao ny ezaka rehetra mba ho mpiara-miombon'antoka azo antoka amin'ny mpanjifanay mifototra amin'ny fiaraha-miombon'antoka tombony sy fiaraha-miasa mandresy fandresena tao anatin'ny folo taona lasa.
Amin'ny taona ho avy dia hanohy hitazona ny finoantsika izahay, handroso mialoha hanome sakafo ara-pahasalamana bebe kokoa ho an'ny mpanjifa manerantany miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifanay sy ny mpamatsy antsika!
Fa maninona no atao sakafo?
Makefood dia hanome ny mpanjifanay serivisy tena tsara. Mijanona ao ambadiky ny vokatray izahay ary miatrika izay olana mety hitranga mandritra ny fizarana, fandefasana ary fandefasana. Hanolotra vidiny mifaninana be amin'ny isaky ny kaontenera izahay - azo antoka.
Raha manana fanontaniana momba ny vokatray na pricelist ianao, dia avelao ny mombamomba anao ary hifandray aminao izahay ao anatin'ny 24 ora.
Vokatra mafana, Sitemap, Sina Frozen Tilapia GS, ASC tilapia fillet, Tapaka ny volan'ny Tilapia be sandry, Sina Tilapia GS, Tilapia GGS, China Tilapia Beky,